Mugabe's party rejoins Mnangagwa's Zanu-PF - Business Daily News Zimbabwe
"We the founders, leaders and supporters of the NPF hereby inform the nation of Zimbabwe that the NPF has disbanded with immediate effect from September 19, 2018," Brigadier-General (Retired) Mutinhiri said in a statement on Wednesday.
"The main reason for disbanding the party is that NPF has outlived its purpose. NPF was formed as a response to the events and circumstances of November 2017 that led to the removal of the previous Government of Zimbabwe and in our opinion we perceived it to be a threat to national security and stability."
"As such we deem it expedient and appropriate to disband NPF and also to join and support the Zanu-PF party and Government in its endeavour to build a better Zimbabwe for all unity and loving and progressive Zimbabwe," he added.
Brig-Gen Mutinhiri resigned from Zanu-PF to head the NPF long considered to be the brainchild of former president Mugabe. He contested the Presidential election on July 30 and lost dismally. His latest climb-down follows that of his mentor, Mr Mugabe, who also recently recognised President Mnangagwa's victory in the July elections and urged Zimbabweans to work with his Government for the development of the country.
'Mutinhiri was not fired but reassigned'
Mutinhiri spills the beans on Mugabe
Mutinhiri spills the beans
Mutinhiri shut the door on Mawarire, MDC Alliance
BREAKING: NPF fires Mutinhiri
Mutinhiri farm invaders defy Zanu-PF directive
Zanu-PF activists invade Mutinhiri son's plot
'Mutinhiri has no grassroots support'
Mutinhiri sued over $54,000 debt